လိုင်းပေါ်မှာ ပျံ့ နေတဲ့ အသံဖိုင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူရဲ့ လုပ်ရပ်အမှားတွေကို ဖွင့်ဟဝန်ခံရင်း အနုပညာတွေဆက်လုပ်လို့ မရတော့ပါဘူးလို့ ပြောလာတဲ့ ယုန်လေး – Cele Snap
ဂီတ သမားတွေကြီးပဲ Group ပရဟိတ Group တခြား နယ်ပယ် အစုံကGroup ပေါင်းများစွာကလည်း ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းအရင်း တွေ ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မ တွေ ရူံ့ချ ပြောဆိုပြီး Group တွေထဲ က ထုပ်ပြစ်ကျပါတယ် . ကျေနပ်စွာ ခံယူပါတယ် ခင်မျာ . ကျွန်တော် အားလုံး ယုံကြည်ချက်ကို ဖျက်စီးတာ မဟုတ်ပါဘူး . နေ့လည်က ဝန်မ်း ညီမလေး တွေအလုပ်ထွက်တဲ့ File လေးတွေ နားထောင်မိတယ် .စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် ။သူတို့လိုအပ်တာတွေ တက်နိုင်သလောက်ကူဖို့လည်း သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ လက်လှမ်းမှီသလောက်စီစဉ်နေချိန်ပါ . အလှူ နဲ့ မဖုံးပါဘူး . ဖုံးလို့လည်း မကေနပ်ဘူးဆိုတာ နားလည်ပါတယ် . အခု မှ ဒီ စကားပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး . တကယ်ပါ .